Ukwelashwa kwamaphutha we-stator ne-rotor core we-high voltage motor
Uma i-high voltage motor core yehluleka, i-eddy yamanje izokwanda futhi i-iron core izoshisa ngokweqile, okuzothinta ukusebenza okujwayelekile kwemoto.
1. Amaphutha ajwayelekile wezinsimbi zensimbi
Amaphutha ajwayelekile wensimbi yensimbi afaka phakathi: isekhethi elifushane elibangelwa i-stator emazombezombe wesifunda esifushane noma isisekelo, ukukhanya kwe-arc kushisa umnyombo wensimbi, olimaza ukwahlukanisa phakathi kwamashidi wensimbi wensimbi futhi kubangele ukujikeleza okufushane; Okuxekethile okuyisisekelo kwensimbi okubangelwa ukungqinisi okungalungile nokunyakaza kwemoto; Ukujija okudala kuyalimala ngenxa yokusebenza okungafanele lapho kudilizwa, futhi ingqikithi ilinyazwa ngamandla omshini ngokunganaki lapho ilungiswa.
2. Insimbi core ukukhanda
Lapho i-winding short circuit noma i-grounding, i-arc ishisa umgogodla wensimbi, kodwa hhayi obucayi, ungalungiswa ngalezi zindlela ezilandelayo: qala ngokuhlanza umnyombo wensimbi, ususe uthuli namafutha, ushise ishidi lensimbi lensimbi elincibilikisiwe ngefayela elincane, eliphucuziwe kuyisicaba, ukuqeda amaphutha eshidi nokuncibilika kweshidi ndawonye. Khona-ke i-stator iron core eduze kwephoyinti iphuzu le-ventilation slots, yenza ukulungiswa kwe-silicon sheet sheet kube ne-leeway, khona-ke ikhasi lephutha lephepha le-silicon lensimbi yensimbi, ishidi lensimbi le-silicon lizoba ukusha ku-carbide lisuswe, bese limbozwa i-silicon yensimbi yensimbi, ibe ungqimba weshidi elincane le-mica, ukungena komoya kwethangi ngaphakathi, gcina umongo uqinise.
Uma umgogodla wensimbi usha emazinyweni omsele, mane ulayishe insimbi yesilicon encibilikisiwe. Uma ukuzinza kwama-windings kuthintekile, i-epoxy resin ingasetshenziselwa ukulungisa ingxenye engekho yomgogodla.
Lapho imikhawulo yamazinyo wensimbi ayimbumba evulwa nge-axial ngaphandle futhi amasongo engcindezi ezinhlangothini zombili angaqinile, kungenziwa imbobo maphakathi kwamadiski enziwe ngamapuleti amabili ensimbi (ububanzi bawo bangaphandle bungaphansi kobubanzi obungaphakathi wemikhawulo ye-stator windings) kanye nesitaki kungafakwa intambo ukuze ucindezele imiphetho yomabili yensimbi bese uqinisa isitadi ukubuyisela umongo esimweni sawo sokuqala. Amazinyo aqhekekile angaqondiswa ngezihlakala zempumulo eziqondile.
I-Generator Rotor Core, Rotor Stator, Stator Rotor Wokushaya, Rotor Stator Wokushaya, I-Stator Lamination Coating, Isitaki Sezimoto, Yonke Imikhiqizo